China ZSG Linear vibrating ihuenyo rụpụta na ụlọ ọrụ | Akụrụngwa Chengxin
ZSG usoro linear vibrating ihuenyo bụ ọhụrụ na oru oma echetakwa akụrụngwa, nke nwere àgwà nke elu arụmọrụ, ala eyi, ala mkpọtụ, ogologo ọrụ ndụ, mmetọ mgbochi, aku na uba mma, ike ịzọpụta na mara mma anya. A na-ejikarị ya arụ ọrụ nyocha nke nnukwu, ọkara na obere ahụ na ntinye, nkà mmụta banyere ígwè, kol, ụlọ ọrụ kemịkal, ike ọkụ, ihe ụlọ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
ZSG usoro linear vibrating ihuenyo bụ ọhụrụ na oru oma echetakwa akụrụngwa, nke nwere njirimara nke elu arụmọrụ, ala eyi, ala mkpọtụ, ogologo ọrụ ndụ, mmetọ mgbochi, aku na uba mma, ike ịzọpụta na mara mma anya. A na-ejikarị ya arụ ọrụ nyocha nke nnukwu, ọkara na obere ahụ na ntinye, nkà mmụta banyere ígwè, kol, ụlọ ọrụ kemịkal, ike ọkụ, ihe ụlọ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Karịsịa na ụlọ ọrụ na-ahụ maka igwe, ọ bụ ihe akachasị eji eme ihe nyocha n'okpuru ọkụ ọkụ ọkụ, osisi coking na onye na-etinye uche. Igwe ahụ na-eji igwe eletriki ike na-azọpụta ume ọhụrụ ma ọ bụ ihe na-eme mkpọtụ dị ka isi iyi egwu, nkwado mmiri mmiri na iche iche. Ọ nwere uru nke nnukwu nhazi ikike, arụmọrụ arụmọrụ dị elu, ngbanwe ihuenyo dị mfe, ntinye na ndozi dị mfe.
ZSG usoro linear vibrating ihuenyo na-eji vibration moto ma ọ bụ ndị nkịtị moto ka mbanye vibration exciter ime ka ihuenyo ahụ na-ama jijiji mgbe ụfọdụ tinyere na-akpali akpali ike direction, na anụmanụ ihe na-akpali parabola tinyere ogologo akara na ihuenyo elu, iji nweta eche nzube.
ZSG usoro linear vibrating ihuenyo nwere vibration iyi, enyo enyo, enyo na ihuenyo, ngwaọrụ damping na ala mgbodo. A na-eji efere ígwè dị elu mee efere akụkụ nke igwe ngebichi, e jikọtara efere dị n'akụkụ ya na ụdọ ahụ na ntọala nke ịma jijiji site na nkpa dị elu ma ọ bụ mgbanaka mgbago. Ọdịdị ahụ dị mma, sie ike ma dịgide.
Ihe ngosi nke ihe omuma nke imeghari ：
Ihe ngosi nke ihe osise nke ọma jijiji ：
Nkà na ụzụ (na igwe vibration)
Ikwusi nha mm
ike nhazi t / h
Onwem na igwe eji egwu
Ntụ ntụ kw
Nka na ụzụ teknụzụ (yana oke egwu)
Ntụ ntụ （kw kw）
Nke gara aga: ZK usoro linear vibrating ihuenyo
Osote: ZSL usoro nnukwu oyi ore vibrating ihuenyo
CGS ọdịiche mgbanwe ihuenyo